နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာသာရေးနဲ့ မကင်းကောင်းဘူး – ၀ီရသူ
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေး မကွဲပြားဘူးဗျ။ ဦးခင်ညွန့်ကို ကန်တော့တာ ဘာသာရေးအရ ဘာသာတရားအဆုံးအမနှင့်အညီ သက်ကြီးရွယ်အိုစာရေးဆရာတွေကို ကန်တော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးနှင့် လုံးဝ မဆိုင်ပါ။ စာရေးစားတဲ့သူမဟုတ်လို့ ကန်တော့ခံဆရာကြီးတွေထဲမှာ စာပေပညာရှင်အဖြစ် စာရင်းမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဦးစီးကျင်းပတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
မကျေနပ်ရင် မကြိုက်ရင် ပွဲစီစဉ်သူတွေ ဖိတ်ကြားသူတွေကိုသာ တင်ပြရပါမယ်။ နိုင်ငံရေးနှင့်ရောထွေးပြီး အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးမဟုတ်ဘူးတို့ အာဏာရှင်လက်ဟောင်းတို့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လုံးဝ မထိုက်တန်ဘူးတို့ စတာတွေနှင့် အကြောင်းပြတာတွေကတော့ အာဃာတတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးရင် လက်ခံရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် လိုက်နာရမယ်။ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ရမယ်။ အခုဟာက အခမ်းအနားမတက်ဘဲ ပြန်သွားသူက သွား၊ နှုတ်ထွက်သူက နှုတ်ထွက်နဲ့ အတော်အရုပ်ဆိုး အကြည်းတန်ပါတယ်ဗျာ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ် စစ်သားမုန်းတီးရေး အာဃာတတွေ ဖိစီးနေတာ အသိသာကြီးပါ။ နိုင်ငံရေးအရောင်အသွေးမရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုပူဇော်ပွဲကို နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ ဝေဘန်နေတာတွေ အမုန်းအခံရှိတဲ့စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားတာတွေ ရပ်တန်းမှ ရပ်ကြပါ။ ဘာသာရေးအခမ်းအနားကို နိုင်ငံရေးအမြင်မျက်စိနဲ့ မဝေဘန်ကြပါနဲ့။
သူ(ဦးခင်ညွှန့်)ကိုယ်တိုင် ဝန်ချမတောင်းပန်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘယ်စင်မြင့်မှာမှ လက်ခံလို့ မရပါဘူး…”
ဝန်ကြီးချုပ် ကိုဖြိုးမင်းသိန်း ရဲ့ညံ့တဲ့ အကွက် တစ်ကွက်လို့ မြင်တယ်။ သူတို့ကို ထိုင်ကန်တော့တာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် တာ ဒါအမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အရ ….
ဒီဇင်ဘာ (၂၉)၊ ၂၀၁၈၊ ရန်ကုန်
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သက်ကြီးစာပေ ပညာရှင်များ ကန်တော့ပွဲ မှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် ကို သက်ကြီး စာပေပညာရှင် အဖြစ် ထည့်သွင်း ခဲ့သလို ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း က လည်း ကန်တော့ ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟာအောင်မြေ မဲဆန္ဒနယ် မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကဗျာဆရာ (ဦး) ငြိမ်းသစ် ကို ငြမ်း မီဒီယာ က ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားပါတယ်။
▪️ငြမ်း – ဦးခင်ညွန့်ကို သက်ကြီးစာပေ ပညာရှင် အဖြစ် ထည့်သွင်း ကန်တော့တဲ့ အပေါ် ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။
ဆရာငြိမ်းသစ် – သူဟာ ဘဝတလျှောက်လုံး စာရေးတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ စာရေးတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပြုပြီး တစ်ကယ့်ကို အနုပညာ ရသ ပါတဲ့ စာပေတွေ ရေးခဲ့တယ်။ စာပေ တစ်ခတ်မှာ ထွန်းကားအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။စာပေနဲ့ မှတ်တိုင် တစ်ခုကို စိုက်ထူ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထဲ မှာ သူ မပါ ပါဘူး။ဒါကြောင့် သူ့ကို သက်ကြီး စာပေ ပညာရှင် အဖြစ် လုံးဝ လက်မခံနိုင် ပါဘူး။သူက ဘယ်တုန်းက မှ ဘယ်စာမှ ဖန်တီးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကျမှ ပြောရရင် နေရာ တစ်နေရာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက်သူ့ ကို စာရေးဆရာ အဖြစ်နဲ့ လည်း မမှတ် ယူဘူး။ သက်ကြီး စာပေပညာရှင် အဖြစ်နဲ့ ဆိုတာကတော့ လုံးဝ ဝေးလာဝေးပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လက်မခံပါဘူး။
▪️ငြမ်း – ဦးခင်ညွှန့် ကို သက်ကြီး စာပေ ပညာရှင် အဖြစ် ထည့်သွင်း ရုံနဲ့ မပြီးဘဲ ရန်ကုန် ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် ထိုင်ကန်တော့ တယ် ဆိုတော့ အခု ပြောဆိုနေကြတဲ့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ကြောင့်လား။ ဒီအပေါ် မှာ ဘာများ မှတ်ချက်ပေးချင်လဲ။
ဆရာငြိမ်းသစ် – ဒါဟာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလို့ မယုံကြည် ပါဘူး။ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး က ဒီလို အမှောင်ခေတ် တစ်ခေတ် ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လူကို လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ရုံနဲ့ ပြီးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် က အမှောင်ခေတ် တစ်ခေတ် ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လူပါ။ သတင်းစာ ဆရာတွေ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာ ဆရာတွေ၊ ကာတွန်း ဆရာတွေ၊ အများကြီး ထောင်ချခဲ့တဲ့ သူပါ။ ထောင်ကို နှစ်ရှည်တွေ ချခဲ့ တာပါ။သူ့ခေတ်တုန်း က စာမျက်နှာတွေ က လည်း အမှောင်ဖုံးလွှမ်း နေခဲ့ တာပါ။ အားလုံး ငွေမင် သုတ်ခံ ရတယ်။ အဖြဲ ခံရတယ်။ အရေးယူ ခံရတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေ ပိတ်ပစ်တယ်။ သတိပေးချက် တွေ ထုတ်တယ်။အဲဒီ တုန်းက စာပေ ကင်ပေတိုင် က လက်စောင်း ထက်နေတဲ့ အချိန် အဲခေတ် ပါပဲ။ သူ ဖန်တီး ထားတာ ပဲ။ စာပေကို ဘယ်တုန်း ကမှ ကောင်းကျိုးပြုခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် မယုံကြည် ပါဘူး။ စာပေသမားတွေပေါ်မှာ နှိပ်ကွပ်တယ်။ နှစ်ရှည် ပြစ်ဒဏ်တွေ ပေးတယ်။ အတွေးအခေါ်အယူအဆ သစ်တွေ မထွန်း ကားအောင် ပြုလုပ်တယ်။ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်က က စာပေစင်မြင့် ပေါ်မှာ ဘယ်တုန်းက မှ မရှိခဲ့ဘူး။အဲလို ပုဂ္ဂိုလ် ကို ဖိတ်ပြီး ကန်တော့ခံ အဖြစ် ပါဝင် လာ တာ က အင်မတန် စက်ဆုပ်ဖွယ် ကောင်းတယ်။ အင်မတန် ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ ပြက်လုံး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို စီစဉ်တဲ့ သူတွေ သူ့ကို ကန်တော့ခံ အဖြစ် ဖိတ်ကြား ခဲ့တဲ့သူတွေ ကို ကျွန်တော် မထောက်ခံ ပါဘူး။ရှုတ်ချပါတယ်။
▪️ငြမ်း – ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး က ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဟာ ကန်တော့ခံ ထဲမှာ ဦးခင်ညွန့် ပါမှန်း သိနေတာတောင် မငြင်းဆန်ဘဲ၊ တစ်ခုခု မလုပ်ဘဲ ထိုင်ကန်တော့တဲ့ အပေါ်မှာရော ဘာများ ပြောချင်သလဲ။
ဆရာငြိမ်းသစ် – ဒါကတော့ ဝန်ကြီးချုပ် ကိုဖြိုးမင်းသိန်း ရဲ့ညံ့တဲ့ အကွက် တစ်ကွက်လို့ မြင်တယ်။ သူတို့ကို ထိုင်ကန်တော့တာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် တာ ဒါအမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အရ ကိုဖြိုးမင်းသိန်း ဟာ တခြားနည်းလမ်း တွေးခေါ်လို့ မရလို့ ယောင်ယောင်မှားမှား လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
▪️ငြမ်း – ဒီကိစ္စက နိုင်ငံရေးအရ ဂျင်းထည့် ခံရတာ လို့ ဝေဖန်မှု တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဘာများ ပြောချင် ပါသလဲ။
ဆရာငြိမ်းသစ် – အဲဒါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂျင်းထည့် ခံရတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုဖြိုးမင်းသိန်း ဟာ ထွက်ပေါက် မရဘဲ ယောင်ယောင်မှားမှား လုပ်ခဲ့တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
▪️ငြမ်း – ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသား တွေ အပေါ် ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဟောင်း ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ကို ပြည်သူ့တွေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ က ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား ဝန်ကြီးချုပ် တစ်ဦး က ထိုင်ကန် တော့ လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ပုံရိပ် က ဘယ်လို သက်ရောက်နိုင် မလဲ။
ဆရာငြိမ်းသစ် – ပြောရရင် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု အားလုံး ဒီမိုကရေစီ အလင်းရောင် အားလုံး ကို မှေးမှိန်အောင် အမှောင် ခေတ်ကြီး ထဲ ကို တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ လုံးဝ မထိုက်တန် ပါဘူး။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ကို ထိုင်ကန်တော့ တဲ့ ကိစ္စကို မပြော တော့ဘူး။ ဒီဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တရားခံ တွေ ပါပဲ။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ မှာ ဘယ်လို အတွေ့အကြုံမျိုးတွေ ရှိလို့ ဘယ်လို အယူအဆမျိုးနဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ် ကို စင်ပေါ်ခေါ်တင် ရသလဲ ဆိုတာ သူတို့ကိုပဲ မေးသင့် ပါတယ်။
▪️ငြမ်း – ဖြည့်စွက် ပြောစရာ ရှိရင်ပြောပေးပါ။
ဆရာငြိမ်းသစ် – ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ထွက်လာ ကတည်းက နိုင်ငံရေး မလုပ်ပါဘူး ပြောတယ်။နောက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး လုပ်မယ်ဆိုပြီး အမျိုးသားရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်အောင်လို့ ဖန်တီးနေ တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ကို စာပေစင်မြင့်ထက်မှာရော ဘယ်လို စင်မြင့်ထက် မှာ မှ မတွေ့ချင် ပါဘူး။ဘယ်ပြည်သူကမှ လည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ နောက် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကျူးလွန် ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေ ကို သူကိုယ်တုိုင် က ဝန်ချ တောင်းပန် ရမှာဖြစ်တယ်။ သူကိုယ်တိုင် ဝန်ချမတောင်းပန်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘယ်စင်မြင့်မှာမှ လက်ခံလို့ မရပါဘူး။
ဓာတ်ပုံ – (ဆရာ) Nyein Thit FB
မဟာအောင်မြေ မဲဆန္ဒနယ် မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကဗျာဆရာ (ဦး) ငြိမ်းသစ်
“နိုငျငံရေးဆိုတာ ဘာသာရေးနဲ့ မကငျးကောငျးဘူး”
မွနျမာ့နိုငျငံရေးသမားတှေ နိုငျငံရေးနှငျ့ ဘာသာရေး မကှဲပွားဘူးဗြ။ ဦးခငျညှနျ့ကို ကနျတော့တာ ဘာသာရေးအရ ဘာသာတရားအဆုံးအမနှငျ့အညီ သကျကွီးရှယျအိုစာရေးဆရာတှကေို ကနျတော့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံရေးနှငျ့ လုံးဝ မဆိုငျပါ။ စာရေးစားတဲ့သူမဟုတျလို့ ကနျတော့ခံဆရာကွီးတှထေဲမှာ စာပပေညာရှငျအဖွဈ စာရငျးမသှငျးနိုငျဘူးဆိုရငျလညျး ဦးစီးကငျြးပတဲ့ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ။
နိုငျငံရေးနှငျ့ မဆိုငျပါ။ မကနြေပျရငျ မကွိုကျရငျ ပှဲစီစဉျသူတှေ ဖိတျကွားသူတှကေိုသာ တငျပွရပါမယျ။ နိုငျငံရေးနှငျ့ရောထှေးပွီး အမြိုးသားရငျကွားစရေ့ေးမဟုတျဘူးတို့ အာဏာရှငျလကျဟောငျးတို့ ဒီမိုကရစေီနှငျ့ လုံးဝ မထိုကျတနျဘူးတို့ စတာတှနှေငျ့ အကွောငျးပွတာတှကေတော့ အာဃာတတဈရပျပဲ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုကိုမွတျနိုးရငျ လကျခံရမယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျကောငျးတဈယောကျဆိုရငျ လိုကျနာရမယျ။ နိုငျငံရေးသမားကောငျးတဈယောကျဆိုရငျ ခှငျ့လှတျရမယျ။ အခုဟာက အခမျးအနားမတကျဘဲ ပွနျသှားသူက သှား၊ နှုတျထှကျသူက နှုတျထှကျနဲ့ အတျောအရုပျဆိုး အကွညျးတနျပါတယျဗြာ။ မွနျမာ့နိုငျငံရေးသမားတှအေပျေါ စဈသားမုနျးတီးရေး အာဃာတတှေ ဖိစီးနတော အသိသာကွီးပါ။
နိုငျငံရေးအရောငျအသှေးမရှိတဲ့ သကျကွီးရှယျအိုပူဇျောပှဲကို နိုငျငံရေးအမွငျနဲ့ ဝဘေနျနတောတှေ အမုနျးအခံရှိတဲ့စိတျနဲ့ ပွဈမှားတာတှေ ရပျတနျးမှ ရပျကွပါ။
ဘာသာရေးအခမျးအနားကို နိုငျငံရေးအမွငျမကျြစိနဲ့ မဝဘေနျကွပါနဲ့။
သူ(ဦးခငျညှနျ့)ကိုယျတိုငျ ဝနျခမြတောငျးပနျဘဲ ကြှနျတျောတို့ ဟာ ဘယျစငျမွငျ့မှာမှ လကျခံလို့ မရပါဘူး…”
ဝနျကွီးခြုပျ ကိုဖွိုးမငျးသိနျး ရဲ့ညံ့တဲ့ အကှကျ တဈကှကျလို့ မွငျတယျ။ သူတို့ကို ထိုငျကနျတော့တာ လကျဆှဲနှုတျဆကျ တာ ဒါအမြိုးသား ရငျကွားစရေ့ေး မဟုတျပါဘူး။ နိုငျငံရေး အရ ….
ဒီဇငျဘာ (၂၉)၊ ၂၀၁၈၊ ရနျကုနျ
ရနျကုနျမွို့တျောခနျးမမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ သကျကွီးစာပေ ပညာရှငျမြား ကနျတော့ပှဲ မှာ စဈထောကျလှမျးရေးဟောငျး ဦးခငျညှနျ့ ကို သကျကွီး စာပပေညာရှငျ အဖွဈ ထညျ့သှငျး ခဲ့သလို ရနျကုနျတိုငျး ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး က လညျး ကနျတော့ ခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး မဟာအောငျမွေ မဲဆန်ဒနယျ မှ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ကဗြာဆရာ (ဦး) ငွိမျးသဈ ကို ငွမျး မီဒီယာ က ဆကျသှယျ မေးမွနျး ထားပါတယျ။
▪️ငွမျး – ဦးခငျညှနျ့ကို သကျကွီးစာပေ ပညာရှငျ အဖွဈ ထညျ့သှငျး ကနျတော့တဲ့ အပျေါ ဘာမြားပွောခငျြပါသလဲ။
ဆရာငွိမျးသဈ – သူဟာ ဘဝတလြှောကျလုံး စာရေးတဲ့သူ မဟုတျဘူး။ စာရေးတဲ့ လုပျငနျးနဲ့ အသကျမှေး ဝမျးကွောငျးပွုပွီး တဈကယျ့ကို အနုပညာ ရသ ပါတဲ့ စာပတှေေ ရေးခဲ့တယျ။ စာပေ တဈခတျမှာ ထှနျးကားအောငျ လုပျခဲ့တယျ။စာပနေဲ့ မှတျတိုငျ တဈခုကို စိုကျထူ နိုငျခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျထဲ မှာ သူ မပါ ပါဘူး။ဒါကွောငျ့ သူ့ကို သကျကွီး စာပေ ပညာရှငျ အဖွဈ လုံးဝ လကျမခံနိုငျ ပါဘူး။သူက ဘယျတုနျးက မှ ဘယျစာမှ ဖနျတီးခဲ့တာ မဟုတျဘူး။ဒီဘကျကမြှ ပွောရရငျ နရော တဈနရော ရပျတညျနိုငျဖို့ အတှကျ ကွိုးစားတဲ့ အဆငျ့ပဲ ရှိပါတယျ။ ဒီအတှကျသူ့ ကို စာရေးဆရာ အဖွဈနဲ့ လညျး မမှတျ ယူဘူး။ သကျကွီး စာပပေညာရှငျ အဖွဈနဲ့ ဆိုတာကတော့ လုံးဝ ဝေးလာဝေးပဲ။ ကြှနျတျောတို့ လကျမခံပါဘူး။
▪️ငွမျး – ဦးခငျညှနျ့ ကို သကျကွီး စာပေ ပညာရှငျ အဖွဈ ထညျ့သှငျး ရုံနဲ့ မပွီးဘဲ ရနျကုနျ ဝနျကွီးခြုပျ ကိုယျတိုငျ ထိုငျကနျတော့ တယျ ဆိုတော့ အခု ပွောဆိုနကွေတဲ့ အမြိုးသား ရငျကွားစရေ့ေး ကွောငျ့လား။ ဒီအပျေါ မှာ ဘာမြား မှတျခကျြပေးခငျြလဲ။
ဆရာငွိမျးသဈ – ဒါဟာ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးလို့ မယုံကွညျ ပါဘူး။ အမြိုးသား ပွနျလညျ သငျ့မွတျရေး က ဒီလို အမှောငျခတျေ တဈခတျေ ကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ လူကို လကျဆှဲ နှုတျဆကျရုံနဲ့ ပွီးသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဗိုလျခြုပျကွီးခငျညှနျ့ က အမှောငျခတျေ တဈခတျေ ကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ လူပါ။ သတငျးစာ ဆရာတှေ၊ စာရေးဆရာတှေ၊ ကဗြာ ဆရာတှေ၊ ကာတှနျး ဆရာတှေ၊ အမြားကွီး ထောငျခခြဲ့တဲ့ သူပါ။ ထောငျကို နှဈရှညျတှေ ခခြဲ့ တာပါ။သူ့ခတျေတုနျး က စာမကျြနှာတှေ က လညျး အမှောငျဖုံးလှမျး နခေဲ့ တာပါ။ အားလုံး ငှမေငျ သုတျခံ ရတယျ။ အဖွဲ ခံရတယျ။ အရေးယူ ခံရတယျ။ မဂ်ဂဇငျးတိုကျတှေ ပိတျပဈတယျ။ သတိပေးခကျြ တှေ ထုတျတယျ။အဲဒီ တုနျးက စာပေ ကငျပတေိုငျ က လကျစောငျး ထကျနတေဲ့ အခြိနျ အဲခတျေ ပါပဲ။ သူ ဖနျတီး ထားတာ ပဲ။ စာပကေို ဘယျတုနျး ကမှ ကောငျးကြိုးပွုခဲ့တယျလို့ ကြှနျတျော မယုံကွညျ ပါဘူး။ စာပသေမားတှပေျေါမှာ နှိပျကှပျတယျ။ နှဈရှညျ ပွဈဒဏျတှေ ပေးတယျ။ အတှေးအချေါအယူအဆ သဈတှေ မထှနျး ကားအောငျ ပွုလုပျတယျ။ဒီလို ပုဂ်ဂိုလျက က စာပစေငျမွငျ့ ပျေါမှာ ဘယျတုနျးက မှ မရှိခဲ့ဘူး။အဲလို ပုဂ်ဂိုလျ ကို ဖိတျပွီး ကနျတော့ခံ အဖွဈ ပါဝငျ လာ တာ က အငျမတနျ စကျဆုပျဖှယျ ကောငျးတယျ။ အငျမတနျ ရယျစရာ ကောငျးတဲ့ ပွကျလုံး တဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲကို စီစဉျတဲ့ သူတှေ သူ့ကို ကနျတော့ခံ အဖွဈ ဖိတျကွား ခဲ့တဲ့သူတှေ ကို ကြှနျတျော မထောကျခံ ပါဘူး။ရှုတျခပြါတယျ။
▪️ငွမျး – ရှဈလေးလုံး အရေးတျောပုံကွီး က ပေါကျဖှားလာတဲ့ ရနျကုနျတိုငျး ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး ဟာ ကနျတော့ခံ ထဲမှာ ဦးခငျညှနျ့ ပါမှနျး သိနတောတောငျ မငွငျးဆနျဘဲ၊ တဈခုခု မလုပျဘဲ ထိုငျကနျတော့တဲ့ အပျေါမှာရော ဘာမြား ပွောခငျြသလဲ။
ဆရာငွိမျးသဈ – ဒါကတော့ ဝနျကွီးခြုပျ ကိုဖွိုးမငျးသိနျး ရဲ့ညံ့တဲ့ အကှကျ တဈကှကျလို့ မွငျတယျ။ သူတို့ကို ထိုငျကနျတော့တာ လကျဆှဲနှုတျဆကျ တာ ဒါအမြိုးသား ရငျကွားစရေ့ေး မဟုတျပါဘူး။ နိုငျငံရေး အရ ကိုဖွိုးမငျးသိနျး ဟာ တခွားနညျးလမျး တှေးချေါလို့ မရလို့ ယောငျယောငျမှားမှား လုပျခဲ့တဲ့ အလုပျလို့ပဲ မွငျပါတယျ။
▪️ငွမျး – ဒီကိစ်စက နိုငျငံရေးအရ ဂငျြးထညျ့ ခံရတာ လို့ ဝဖေနျမှု တှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ဘာမြား ပွောခငျြ ပါသလဲ။
ဆရာငွိမျးသဈ – အဲဒါတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဂငျြးထညျ့ ခံရတာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကိုဖွိုးမငျးသိနျး ဟာ ထှကျပေါကျ မရဘဲ ယောငျယောငျမှားမှား လုပျခဲ့တယျလို့ မွငျပါတယျ။
▪️ငွမျး – ဒီမိုကရစေီ အရေး လှုပျရှားခဲ့တဲ့ ရဟနျးရှငျလူ ကြောငျးသား တှေ အပျေါ ဖိနှိပျခဲ့တဲ့ စဈထောကျလှမျးရေး ဟောငျး ခေါငျးဆောငျ တဈဦး ကို ပွညျသူ့တှေ ရှေးခယျြထားတဲ့ အစိုးရ အဖှဲ့ က ဒီမိုကရစေီ ဘကျတျောသား ဝနျကွီးခြုပျ တဈဦး က ထိုငျကနျ တော့ လိုကျတယျ ဆိုတဲ့ ပုံရိပျ က ဘယျလို သကျရောကျနိုငျ မလဲ။
ဆရာငွိမျးသဈ – ပွောရရငျ ဒီမိုကရစေီ လှုပျရှားမှု အားလုံး ဒီမိုကရစေီ အလငျးရောငျ အားလုံး ကို မှေးမှိနျအောငျ အမှောငျ ခတျေကွီး ထဲ ကို တှနျးပို့ခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျပါ။ ဒီပုဂ်ဂိုလျနဲ့ ဒီမိုကရစေီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ လုံးဝ မထိုကျတနျ ပါဘူး။ ဒီပုဂ်ဂိုလျမြိုး ကို ထိုငျကနျတော့ တဲ့ ကိစ်စကို မပွော တော့ဘူး။ ဒီဖိတျကွားခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေ တရားခံ တှေ ပါပဲ။ ဒီပုဂ်ဂိုလျတှေ မှာ ဘယျလို အတှအေ့ကွုံမြိုးတှေ ရှိလို့ ဘယျလို အယူအဆမြိုးနဲ့ ဒီပုဂ်ဂိုလျ ကို စငျပျေါချေါတငျ ရသလဲ ဆိုတာ သူတို့ကိုပဲ မေးသငျ့ ပါတယျ။
▪️ငွမျး – ဖွညျ့စှကျ ပွောစရာ ရှိရငျပွောပေးပါ။
ဆရာငွိမျးသဈ – ဒီပုဂ်ဂိုလျဟာ ထှကျလာ ကတညျးက နိုငျငံရေး မလုပျပါဘူး ပွောတယျ။နောကျ အမြိုးသားနိုငျငံရေး လုပျမယျဆိုပွီး အမြိုးသားရေး အဓိကရုဏျး ဖွဈအောငျလို့ ဖနျတီးနေ တယျလို့ မွငျပါတယျ။ ဒီလို ပုဂ်ဂိုလျမြိုး ကို စာပစေငျမွငျ့ထကျမှာရော ဘယျလို စငျမွငျ့ထကျ မှာ မှ မတှခေ့ငျြ ပါဘူး။ဘယျပွညျသူကမှ လညျး လကျခံမှာ မဟုတျပါ ဘူး။ နောကျ ဒီပုဂ်ဂိုလျရဲ့ ကြူးလှနျ ခဲ့တဲ့ အပွဈတှေ ကို သူကိုယျတိုငျ က ဝနျခြ တောငျးပနျ ရမှာဖွဈတယျ။ သူကိုယျတိုငျ ဝနျခမြတောငျးပနျဘဲ ကြှနျတျောတို့ ဟာ ဘယျစငျမွငျ့မှာမှ လကျခံလို့ မရပါဘူး။
ဓာတျပုံ – (ဆရာ) Nyein Thit FB
မဟာအောငျမွေ မဲဆန်ဒနယျ မှ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ကဗြာဆရာ (ဦး) ငွိမျးသဈ
မန်းဟော်သဓာအတွက် နေပြည်တော် မဘသ အလှူတော်
အကြမ်းဖက်ဘေးသင့် ရခိုင်ပြည်သူများအတွက် အလှူတော်(၁၁)